AASraw alaabooyinka taxanaha budhcadda ah ee loo yaqaan 'Nootropics' - Kaadi AASraw
/ Products / Noorrooto budada
Waxaan nahay Nootropics budada alaab iibiye, Nootropics budada budada ah ee iibinta, Sida aan ku ballanqaaday, dhammaan budhadhkeena budada ah ee budada ah ayaa leh xayawaan aan ka yarayn 98%.
Daawooyinka Nitrate-Nootropics, oo sidoo kale loo yaqaano daroogada akhristaha iyo xoojiyeyaasha garaadka, waa daroogo, daawooyin, iyo waxyaabo kale oo hagaajiya shaqooyinka garashada, gaar ahaan hawlaha fulinta, xasuusta, hal-abuurka, ama dhiirigelinta, qof caafimaad leh.
Isticmaalka garashada-kordhinta daawooyinka ayadoo la adeegsanayo shakhsiyaadka caafimaadka qaba ee maqnaanshaha calaamadaha caafimaadka waa mid ka mid ah mawduucyada ugu mudan ee ka dhexjirta neurosuusyada, dhakhtarka maskaxda, iyo takhaatiirta kuwaas oo soo bandhigaya arrimo dhowr ah, oo ay ka mid yihiin anshaxa iyo cadaalada isticmaalka, saameynta, iyo isdaba-joogga daawooyinka rijeetada loo adeegsado isticmaalka aan macaamiisha ahayn, iyo kuwo kale. Si kastaba ha ahaatee, iibinta caalamiga ah ee garashada-kordhinta dheeraadka ah ayaa dhaaftay bilyan doolar US $ 1 ee 2015 iyo baahida adduunka ah ee xeryahaan ayaa wali si dhaqso ah u koraya.
Tootropics budada budada ah - mararka qaarkood loo yaqaan daroogada cilmiga ah - waa xeryoodyo sii kordhiya howlaha maskaxda. Waxay noqonayaan hab caan ah oo aad maskaxdaada u siiso koror dheeraad ah. Sida laga soo xigtay wargeyska Telegraph, illaa 25% ee ardayda jaamicadaha ee ingiriiska ku jira ayaa qaatay mashiinka loo yaqaan 'smart modafinil', iyo shaqaalaha tiknoolajiyadda California ayaa isku dayaya wax kasta oo ka yimaada Adderall ilaa LSD si ay maskaxda ugu riixaan qalab sare.
Waxaan si firfircoon uga faa'iidaystay budada Nootropics budada tan iyo 1997, markii aan la tacaalay waxqabadka garashada iyo amar ku dhowaad $ 1000 qiimaha daroogada caanka ah ee Yurub (meesha kaliya ee aad ku heli kartid waqtiga). Waxaan xasuustaa furitaanka baako aan caan aheyn oo la yaabay in daawooyinka iyo walxaha dabiiciga ah ay dhab ahaantii kordhin lahaayeen maskaxdayda.
Waxay sameeyeen, waxaanan ahaa taageere weyn oo ka mid ah horumarinta garashada qaarkood tan iyo tan.
Waan ka baqayaa dadka kale, inkastoo. Dhibaatada ayadoo la isticmaalayo erey buste sida "Nootropics budada budada" waxay tahay inaad siibto dhammaan noocyada walxaha. Farsamo ahaan, waxaad ku doodi kartaa in kafiin iyo kookayn yihiin budada Nootropics labadaba, laakiin way adag tahay. Siyaabo badan oo lagu xoojiyo howlaha maskaxda, badankooduna waxay leeyihiin halisyo halis ah, waa qiimaha ugu muhiimsan in la eego budada Nootropics budada iyadoo loo eegayo kiis-kiis.
1) Modafinil waa budada ugu caansan ee loo yaqaan "Nootropics". Sababta wanaagsan: waxay abuurtaa xaalad awood u leh garashada garashada, taas oo lagu gartey diiradda, wacyigelinta, iyo diiradda. Sababtaas awgeed, waxaa loo adeegsadaa astronauts garoonka Station International Space, ciyaaraha caalamiga ah iyo diyaaradaha duulimaadka Mareykanka ee Maraykanka.
2) Phenylpiracetam waa qaab la baddalay ee Piracetam, asalka Nootropics budada. Marka lagu daro kooxda Phenyl, Phenylpiracetam waa 10 waqtiyo badan oo xoog leh, isla markaana si dhakhso ah u shaqeeya. Tani waxay u oggolaaneysaa xitaa qadar yar oo ah inay bixiso koritaan xoog leh oo dhexdhexaad ah oo lagu gaaro garashada iyo wax soo saarka.
3) Armodafinil waxay hagaajineysaa xasuusta. Armodafinil wuxuu u dhigmaa Modafinil. Waxay hagaajinaysaa xusuusta muddada dheer waxayna kor u qaadaysaa wacyigelinta dadka bukaanka leh hurdada xad-dhaafka ah ee ka yimaada hurdada hurdada ee hurdada iyo is-bedelka shaqada.
4) Piracetam waxay hagaajineysaa xasuusta. Piracetam waxay wanaajisay xusuusta muddada fog / mudada gaaban ee wiilasha naqshadaynta 60.
Piracetam waxay soo bandhigtay xusuusin weyn oo ku saabsan xusuusta muddada-gaaban iyo kuwa aan dhamaadka lahayn ee xusuusta iyo bukaannada ku jira qaliinka boogaha.
Daaweynta daba dheeraatay (250 mg / kg) waxay si weyn u wanaajisay xasuusta shaqada iyo kordhinta xasuusto (+ citinnin) ee jiirarka oo leh amnia daroogo loo yaqaan.
5) Oxiracetam Waxay Hirgalisaa Xasuusta. Bukaannada 'Alzheimer' ama 'multi-infazct' waallida ',' 800 mg oxiracetam laba jeer maalin walba waxay xasuustaa xusuusta, iyadoo aan lahayn calaamado dulqaad leh. Hase yeeshee, qaar ka mid ah tijaabooyinka garashada waxay ahaayeen kuwo ka hooseeya heerka aasaasiga ah ka dib dabagalka dabayaaqadii dambe.
Bini'aadamka, oxiracetam waxay muujineysaa horumarin weyn oo ka dhalaneysa xaaladaha xasuusta marka la barbar dhigo burcad-badaha. In jiirka iyo jiirarka, oxiracetam xasuusto xusuusta iyo sidoo kale piracetam. Intaa waxaa dheer, waxaa kale oo ay hagaajisay awoodda barashada.
6) Pramiracetam waxay hagaajineysaa Xusuusta. Pramiracetam waa suuq gashaa daaweyn loogu talagalay xasuusta xusuusta iyo feejignaanta dadka waayeelka ah ee leh jirrooyinka maskaxda ka dila iyo waallida waallida. Pramiracetam waxay leedahay saameyn heer qaran ah oo lagu hagaajinayo xasuusta bukaanka iyada oo aan lahayn oksijiin maskaxda ku jirta.
7) Phenylpiracetam / Phenotropil waxay hagaajisaa xajinta. Farsamooyinka fenylpiracetam / phenotropil ma aha kuwo caafimaad ahaan lakulma laakiin waa inay la mid yihiin daawooyinka kale ee qoyska cunsurta ah.
Si aad u iibsatid mashiinka khamriga ah ee daroogada ah, isku day inaad hubiso in warbixinta HPLC ay la socoto COA iyo dukumentiyo kale si loo xaqiijiyo inay yihiin daacad iyo kuwa ugu sareeya.